Ukubuyekezwa kwe-EU Casino South Africa - 100% kufika ku-100 Mega Spins ⭐
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-eu casino
Isibuyekezo se-EU Casino
Isofthiwe:NetEnt, Aristocrat, Cryptologic, Microgaming, NextGen
Usizo: 24/7, 24/7 customer support through email, BitcoinTalk, Complaints Section, Live chat
Ibhonasi Lokukwamukela:100% Ize ifike 100 Izikhathi Zokudlala Mahhala
I- EU Casino. inikeza isipiliyoni semidlalo esezingeni eliphakeme kubadlali baseNingizimu Afrika. Ukunikeza bonke abadlali abasha amabhonasi emali amahhala, kanye nohlu olukhulu lwemidlalo, ukwesekwa okungama-24/7 kanye neklabhu ye-VIP, ikhasino likufanele ukuvakashelwa. Ilayisensiwe yiLottery and Gaming Authority, ikhasino livikelekile ngobuchwepheshe bokubethela idatha futhi imidlalo yalo ihlolwe ngokuzimela yi-iTech Labs.
Ngaphambi kokwenza idiphozi, funa ibhonasi futhi ujabulele ukudlala ngemali yangempela ngaphandle kwengozi ebhange lakho. Abadlali abasha ababhalisa ekhasino bangajabulela iphakethe lebhonasi eliyamukelekile elikhethekile eliza ne-100 Free Spins (1 spin yamahhala ngayo yonke i-R10 efakiwe) + 30 Spins Spins yamahhala!
Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ikhasino ayiphoqeleli ukubheja ekuwinweni kokunikezwa kwe-spin kwamahhala. Ikhasino libuye linikeze amanye amaphromoshini amaningi namabhonasi, kufaka phakathi amabhonasi wokuphinda ulayishe nyangazonke, i-Happy Hour namabhonasi akhethekile anomkhawulo. Ikilabhu le-VIP elinemigqa eyisithupha linikeza izinzuzo ezahlukahlukene ezibandakanya ukheshi ekubhejeni ngakunye okubeka, amabhonasi akhethekile kanye nokukhushulwa, izimemo zemicimbi ye-VIP kuphela, imali yamahhala yokunqoba imidlalo emisha, ukukhishwa kwemali ngosuku olufanayo kufaka nezimpelasonto, kungekho ukubheja Amaphoyinti e-VIP ashintshaniswa ngemali nomphathi we-VIP ozinikele.
Amakhasino e-EU anikwa amandla abahlinzeki be-software abahlukahlukene abanjengo-Amaya Gaming, SkillOnNet, Aristocrat, Evolution Gaming, NetEnt, NYX Interactive, WMSc futhi itholakala kunguqulo yokulanda futhi ingabi khona nohlobo lokulanda olusheshayo, olwenza ifinyeleleke kubadlali be-PC ne-Mac. Ufuna ukudlala kusuka kuselula yakho? Ikhasino libuye lihambisane namaselula amaningi, amadivayisi namathebulethi afaka i-Android, i-iPhone ne-iPad. I-EU Casino inikeza ukusekelwa kwamakhasimende okungu-24/7, nabamele amakhasimende abakhona ukusiza nge-imeyili, ngocingo nangengxoxo ebukhoma esheshayo. Kunezindlela eziningi zokukhetha zokukhokha ezitholakalayo futhi abadlali baseNingizimu Afrika bangadlala kuma-SA Rands ukuze kube lula ukwengeza. Ungakhetha kusuka ezinkethweni eziningi zokukhokha, kufaka phakathi amakhadi wesikweletu, ama-e-wallets namakhadi akhokhwe kusengaphambili. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemidlalo ethokozisayo ongakhetha kuyo.
Funa iphakethe lakho lamabhonasi wokwamukela ekubhaliseni bese uqala ukudlala imidlalo oyithandayo ekhasino laseNingizimu Afrika elidumile, i- EU Casino.
Izinhlobonhlobo zegeyimu: Ama-Slots, imidlalo yamakhadi, imidlalo ye-progressive, imidlalo ebukhoma, imidlalo yetafula, i-video poker nama-Scratch Cards.
Izinketho Zediphozi: Visa & MasterCard, Skrill, WebMoney, Neteller, Wiredcard, PaySafeCard, iDeal, Przelewy, Euteller, BankLink, SpeedCard, e-Wire nezinye eziningi.
Kusungulwe: 2009 Inombolo yamahhala ye-SA: Ayikho
Opharethwa ngu: SkillOnNet I-imeyili: [email protected]
Ilayisensi: IMalta, UK, ne Denmark Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Inguqulo Yekhasino Yeselula: Yebo Ukuxhaswa kwe-24/7/365: Yebo
Inguqulo Engalandiwe Yokulanda: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi
Umnikelo Wokwamukelwa EU Casino
Ibhonasi Engana Diphozithi: Akukho
Umnikelo Wokwamukela : I-100 Spins yamahhala (i-spin yamahhala eyodwa-1 ngayo yonke i-R10 efakiwe) + I-30 Spins engaphezulu yamahhala
Imiqhudelwano :: Imiqhudelwano Emnandi ebanjwa masonto onke Vakashela isayithi ukuthola imininingwane.
Amaphromoshini ansuku zonke / amasonto onke: Bheka iwebhusayithi ukuthola eminye imininingwane.
Iqembu Lokwethembeka: Yebo – Thola amaphuzu wokuthembeka njengoba udlala.
– Akukho ukubheja ngokuwina ekunikeleni ama-Spin Wamahhala
– Ukubheja kumabhonasi ethu kungu-30x ngaphansi kuphela kunani lebhonasi.
– Ukuphuma kwemali ngosuku olufanayo kufaka nezimpelasonto.
– Akukho ukubheja kuma-VIP Points ashintshelwe imali